Google I / O wuxuu aad ufududeeyey Apple | Wararka IPhone
Google I / O wuxuu aad ufududeeyay Apple
In labada shirkadood ee hormoodka ka ah dunida teknolojiyadda, internetka iyo softiweerradu ay dhacdooyinkooda aad ugu soo dhowaadaan waqtiga ay leeyihiin cawaaqib deg deg ah, taasina waa in isbarbardhigyada, ee had iyo jeer lama huraanka ah, markan sidoo kale uu otomaatig noqon doono. Muhiim ma noqon doonto in la jiido maktabadda wargayska si loo arko waxa Google yidhi ka dib markay arkeen waxa Apple leeyahay 8, maxaa yeelay dhacdada Google weli waxay ku jiri doontaa xusuusteenna ugu dambaysa. Sannadkanna aragtida ayaa ah taas Google waxay uga tagtay saxaarad Apple si kani bisadda u geeyo biyaha, maxaa yeelay waxa la yiraahdo hal-abuurnimo badan oo Google I / O ah ma ahayn. Waxaan xitaa dhihi karnaa inta badan wararka ay Google soo bandhigtay maalintii dhaweyd waxaa horey u soo bandhigay shirkadda Apple sanad ka hor.
3 Mashruuca Brillo
4 Sawirrada Google
5 Maqnaanshaha weyn
6 Hadda waa markiisa Apple
Sida lagu xamanayo inuu yahay kiiska Apple iyo macruufkiisa cusub ee 9, Google ayaa dhinac iska dhigtay waxyaabihii lala yaabay oo waxaad go'aansatay inaad siiso nidaamkaaga cusub ee hawlgalka xasilooni dheeri ah, hagaajinta waxqabadkiisa, kordhinta nolosha batteriga iyo hagaajinta cilladaha. Sannad fiican uma ahayn Lollipop ama IOS 8, cabashooyin badan oo ka yimid adeegsadayaasha, gaar ahaan aalado duug ah oo arkay waxqabadkooda oo si aad ah hoos ugu dhacay ka dib markii la cusbooneysiiyay nooca cusub.
Maxaa ku cusub Android M? Hab cusub oo nuqul ama dhajin ah oo lama huraan u eg kan macruufka, haa, oo leh naqshad badan oo ah «Qalabka naqshadeynta», hab cusub oo oggolaansho looga codsado codsiyada isticmaalka kamaradda, makarafoonka iyo shaqooyinka kale ee qalabkeenna la raadinayo midka ay adeegsadaan macruufka dhowr sano, iyo wax kale oo yar.
Lacag ku bixi qalabkaaga moobaylka adiga oo isku aqoonsanaya farahaaga. Ma jiraa qof og? Google waxay u rogtay Google Wallet-ka oo loo yaqaan 'Android Pay' waxayna ku sameysaa iyada oo la adeegsanayo nidaam la mid ah kan Apple iyo kan Apple Pay, kuwaas oo sida aad u jeedaanba ay koobiyeystaan ​​in ka badan magaceeda. Dabcan, waxay ku dhawaaqeen nidaam cusub, Hands Free, oo aad ku bixin kartid "gacmo la'aan." Iibsadaha ayaa soo galaya dukaanka, wuxuu dhahay "Waxaan rabaa inaan ku bixiyo lacagta Google" wuxuuna ka tagayaa isagoo bixiyay alaabtiisa, isagoon taaban jeebkiisa ama taleefankiisa. Mashruuc shaki badan ka tagaya sida nabadgelyadiisa, laakiin taasi weli waxay ku jirtaa weji bilow ah oo tijaabooyin ah oo haddii ay shaqeyso, waxay noqon kartaa mid cusub.
Waa sida Google ugu yeerto mashruuceeda inay bixiso isku xirnaanta waxyaabaha aan maalin walba isticmaalno. Waa "internet-ka waxyaabaha" oo xusuusinaya HomeKit, wixii Apple noo sheegay sanad ka hor laakiin wali ma aanan awoodin inaan wax aragno. Google ayaa si lamid ah sameysay, ka hadal laakiin iyada oo aan faahfaahin badan laga bixin, waana inaan sugnaa ilaa dhamaadka sanadka si aan u aragno wax dhab ah oo ku saabsan.
Xidiga xaflada iyo waxa qof walba ka hadlayo. Runtii maahan wax ikhtiraac ah, in kasta oo ay dharbaaxo culus ku tahay Apple iyo qorshayaasheeda keydinta daruuriga ah. Kaydinta sawiradaada daruuraha waxay jirtay mudo dheer, aqoonsi waji sidoo kale (iPhoto waxay haysatay sanado). Sawirka Google wuxuu noqon lahaa "Sawirro kujira iCloud", oo leh astaamo dheeri ah oo xiiso leh (sida sameynta gif-yada marka ay jiraan sawiro qarxaya ama saf ah) iyo ka sarreeya dhammaan, bilaash iyo aan xad lahayn. Dabcan, sidaan horeyba kuugu sheegay maqaalka ku saabsan adeeggan, shuruudaha isla iskaga taga shaki badan.
Dhacdadii ayaa dhammaatay ma jiro wax war ah oo ku saabsan Android Wear, Android Car iyo Android TV. Ma jiraan aalado cusub oo la muujiyey midkoodna. Waa wax lala yaabo in waaxda ay Google hoggaanka u hayso Apple, ee smartwatches, sannadkan aysan door hoggaamineed ku lahayn Google I / O, laga yaabee xilligii ay ugu baahnayd inay joojiso guusha Apple Watch. .
Hadda waa markiisa Apple
8da Juun, Apple waxay fursad u heli doontaa inay hoggaanka u qabato Google, ama maya. Waxay u muuqataa in waqtiyadii markii ay ahayd Google ee u riyaaqay in loo tixgeliyo kuwa ugu hal-abuurka badan iyo kuwa halista badan ay dhammaadeen, haddana waxay xoogaa ka dambeysaa Apple. Shirkadda Cupertino ma ka faa'iideysan doontaa fursadda ay Google siiso mise sidoo kale ma joogsan doontaa? Usbuuc gudihiis waxaan ka takhalusi doonaa shakiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google I / O wuxuu aad ufududeeyay Apple
Anigu waxaan ahay horumariye iOS ah sidaa darteed waxaan ahay dhanka Apple, laakiin waxa xun ee tan ku saabsan ayaa ah in Apple hubaal uusan soo bandhigin wax "hal-abuurnimo" ah WWDC hahaha ...
Jawaab Fidel Lopez
TuLotero, ka qaybqaado Bakhtiyaa-nasiibka Gobolka iyo Khamaarista ka socota iPhone-ka
Kiiboodhka teebku wuu dhintaa